Maalinta: Sebtember 3, 2018
Dönem Denizli Student Card vize, oo ay bixiso Denizli Dawlada Hoose ee Magaalooyinka si loogu isticmaalo basaska magaalada, ayaa biloowday waqtiga fiisaha. Xilliga fiisaha 30 wuxuu dhacayaa bisha Sebtember 2018. Gaadiidka basaska magaalada ee Denizli Metropolitan District [More ...]
65-Meter Cusub Cusub ee Arifiye Ku Taaban Doona Maalmaha Furitaanka
Shaqooyin ayaa ka socda buundada oo ay bixinayso Arifiye oo ay bixiso Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya. Farxad, “dhererka mitirka 65, dhererka mitirka 17 ee buundada waa la isweydiin doonaa ka dib markii la rakibo dejinta kore ee kore. Xoghaynta iyo [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay sii wadaysaa inay dhisto boulevyo kuwaasoo u keenaya xasillooni weyn taraafikada Kayseri. Marxaladda labaad ee Hulusi Akar Boulevard, oo ka mid ah mashruucyada Duqa Magaalada Mustafa Mustafa Çelik uu muhiimad weyn u leeyahay, [More ...]
3. Meelaha Gaadiidka Gaadiidka iyo Khadka Lacagta
Magaalada Istanbul ayaa noqon doonta garoonka diyaaradaha ee ugu weyn adduunka oo soo dhowaanaya dhamaadka shaqooyinka jihada furitaanka garoonka diyaaradaha oo la furi doono bisha October ee rakaabka 29 la go’aamin doono qiimaha. 3. Basas badan oo ka socda 150 ilaa garoonka diyaaradaha [More ...]
Khadka toosan ee Akçaray Tram Line waxay u fidin doontaa Kocaeli Stadium: Kocaeli Metropolitan Municipal ayaa ku dhawaaqday in khadka tareenka Akçaray uu fidin doono ilaa Kocaeli Stadium kadib Kuruçeşme iyo Şehir Hospital. Khadadka taraamku wuxuu ku fidaa magaalada oo dhan. [More ...]
Dabka ayaa ku gudbaya tareenka rakaabka ee Ruushka
Tareenka rakaabka ah oo ka yimid Tomsk, Russia kuna sii jeeday Anapa ee gobolka Krasnodar ayaa lagu gubay socodka. Tareenka rakaabka ah ee '134' oo ka baxaya magaalada Tomsk ee Siberiya, Russia kuna sii jeeday magaalada Anapa ee Krasnodar [More ...]
Calaamadda Cusub ee Cusub ee New York wuxuu noqon doonaa Tramways
Magaalada New York, ayagoo u sabab ah carqaladeynta weyn ee ku imaaneysa dhibaatooyinka gaadiidka dhulka hoostiisa ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada waxaa lagu tirtiri doonaa nidaamka tareenka. Duqa Magaalada New York Bill de Blasio wuxuu sameynayay daraasad labo sano ah oo suuragal ah, [More ...]
Gudboonaado dagaal dhaqaale Intensive Turkey ah ee intaa dheer in dagaal mar dhinacyo badan oo kala duwan si kalsooni leh u socdaan jihada bixisaan kor ka mid ah mashaariicda waaweyn ee gaadiidka. Wasaaradda Gaadiidka 2018 [More ...]
Mashruuca Shidaalka ee Shiinaha ee Mashruuca Ganacsi ama Ganacsi ayaa leh Dalalka Qoomiyadaha ah?
Mashruuca ballaaran ee Shiinaha ee 'Belt iyo Road', wuxuu ka tegayaa sannadka 5, halka qaar ka mid ah waddamada ka qeyb galaya ay noqdeen kuwo deyn ku maqnaa oo aan awoodin inay dib u bixiyaan amaahda. maskaxda ku soo dhigaysa su’aasha. initiative [More ...]
TCDD waxay sii wadaysaa inay u diyaariso animations macluumaad ku saabsan adeegsadayaasha tareenka. Markii hore, khataraha ka dhalan kara iyo ka hortagga tuurista dhagaxyada tareenka waxaa lagu daray animation cusub. Muuqaalka animation-ka cusub waa isugeyn heer la is hortaago [More ...]
Degmada Manisa ee Magaalada Selendi Mehmet Akif Ersoy Street ayaa wadadiisii ​​iyo hawshiisii ​​tretuvar ay dhamaatay. Wajiga labaad ee howlaha, asphalt kulul waxaa sameyn doona Agaasinka Dhismaha Wadooyinka iyo Dayactirka. dhigay [More ...]
RayHaber 03.09.2018 Warbixinta Shirka
Hawlaha korantada waxaa lagu samayn doonaa İskenderun-Narlı Saldhigga Farsamada ee Gaadiidka Dadweynaha Khadadka Gaadiidka Dadweynaha iyo Adeegga Falanqaynta Aagagga
Gaziantep waxay ku Gawaari doontaa Gaadiidka Degdega ah oo jaban oo leh Maalgashiga Gaziray Metro
Maalgashiga Gaziray Metro wuxuu helayaa Gaadid Degdeg ah oo Jaban oo Gaziantep ah: Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin, Kuxigeenada AK Party Gaziantep, AK Party Şahinbey ururkii degmada 4 waxaa la fuliyay sanadkaan mega. [More ...]